Mpanamboatra sy mpamatsy masinina mahery vaika any China - Puhua
an-trano > Products > Milina fanapoahana tifitra > Masinina miparitaka
1.Fampidirana ny milina fipoahana
2.Famaritana ny milina fipoahana:
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana milina famafazana Tumb Blast tsy miova arakaraka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa amin'ny antsipirian'ny workpiece, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Details an'ny milina fipoahana:
4. Fanamarinana ny milina fipoahana:
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny milina fanodikodinam-bola avo lenta :, serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny vidin'ny fifaninanana dia nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mihoatra ny kontinanta dimy izahay.
2. Ahoana ny fametrahana ny milina fipoahana:>
4. Ahoana ny fifehezana ny kalitaon'ny milina fipoahana :?
5. Inona no ampahany miasa afaka manadio amin'ny Tumble Blast Machine :?
Raha liana amin'ny milina famafazana ianao :, tongasoa ianao hifandray aminay.
Hot Tags: Masinina miparitaka, mividy, namboarina, be, Sina, mora vidy, fihenam-bidy, vidiny ambany, mividy fihenam-bidy, lamaody, farany, kalitao, mandroso, maharitra, mora raisina, fivarotana farany, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, ao anaty tahiry, santionany maimaimpoana , Marika, vitaina any Chine, Vidiny, Lisitry ny vidiny, Teny nalaina, CE, Warranty herintaona